umthetho wabucala | SActivator.com
sactivator.com siyaqonda ukuba iimfihlo inkcazelo yakho yobuqu kubalulekile. Nazi iinkcukacha koko iintlobo iinkcukacha esizifumana aqokelele xa usebenzisa 'sactivator.com'Nendlela silondoloze inkcazelo yakho.
Asikhe kuthengisa inkcazelo yakho yobuqu amaqela esithathu.
Sisebenzisa iinkampani intengiso yomntu wesithathu iintengiso xa undwendwele iwebsite yethu. Iintengiso singaqulatha cookies enokuthi kusetyenziswa iinkampani entengiso ukuqonda ngcono ukhetho lundwendwe kwaye kubanceda ukuba ukubonisa iintengiso ezinxulumene. nokuba, i cookies ezifunyenweyo kunye iintengiso eqokelelwe yinkampani iintengiso kwaye asinazo ukufikelela ukuba ulwazi. Ezi nkampani ukusebenzisa ulwazi (hayi kuquka igama lakho, idilesi, idilesi yemeyile, okanye inombolo yemfono) malunga nabantu kule nezinye websites ukwenzela ukunika iintengiso iimveliso kunye neenkonzo umdla kuwe.
Sisebenzisa iinkampani intengiso yomntu wesithathu iintengiso xa undwendwele iwebsite yethu. Ezi nkampani ukusebenzisa ulwazi (hayi kuquka igama lakho, idilesi, okanye idilesi ye email) malunga nabantu kule nezinye websites ukwenzela ukunika iintengiso iimveliso kunye neenkonzo umdla kuwe. Ukuba ufuna ingcaciso engaphezulu malunga nale ndlela kwaye ungathanda ukwazi iinketho zakho ngokunxulumene·yokuba le nkcazelo esetyenziswa zezi nkampani.
Watch Umboniso Malunga bucala nkqubo